Ogaden News Agency (ONA) – WFP ma kahyr bay u wadaan Somaliya masa shar
WFP ma kahyr bay u wadaan Somaliya masa shar
Maqaal aad u xiisa badan ayuu arintaa ka qoray Mr. Thomas C. Mountain oo ah saxafi madaxbanaan oo wax ka qora arimaha Geeska Afrika, isagoo ku bilaabay maqaalkiisa;
Sanadkii 2006dii ayuu beeralay Somali ah suuqa keenay dalagii uga soo baxay beertiisa, isla waqtigaa ayay haya’adda WFP bilowday inay u qaybiso Somalida raashinkii sanadka dhan loogu talagalay. Kumanaan tan oo raashin lacag la’aan ah oo suuqa la soo dhoobay waxay ku kaliftay beeralaydii Somaliyeed inay waayaan qof wax ka iibsada ka dibna sidaa ayay ku khasaareen.
Kumanaan beeralay Somali ah oo cadhaysan ayaa ku soo banaanbaxay meelihii ay WFP wax ku qaybinayeen. Si ay xaaladda u dajiyaan waxay ballan qaadeen WFP inay baadhitaan ku samaynayaan arinta, waxayna cadeeyeen inay khalad ka galeen beeralayda Somaliyeed taasoo aan dib dambe u dhici doonin.
Hasa ahaatee 2007dii ayay sidii horoo kale WFP suuqa u keeneen una qaybiyeen raashin mucaawano ah laakiin markan waxaa ilaalinayay ciidankii Itobiyaanka ahaa. Afar sano ka dib oo raashinkaa kolna la keenayay kolna la waynayay, abaaraha inta badan Somaliya ku dhuftay miyaan la odhan karin WFP ayaa qayb ka ah oo musmaarkii ugu dambeeyay ku dhuftay naxashkii la saaray beerihii Somaliya.
Mr. Thomas C. Mountain wuxuu intaa raaciyay inay ku saxsanaayeen Shabaabka markay ka soo eryeen WFP meelaha ay gacanta ku hayaan Kuunfurta Somaliya. Wuxuu isweydiiyay iyadoo dhowr bilood ka hor un ay WFP 70% ka jareen raashinkii ay siin jireen milyanka qof ee Somalida ah miyaan rumaysan karnaa maanta inay yidhaahdaan waxaan ka walwalsanahay dhibaatada ay abaaraha u keeneen shacabka Somaliyeed?
Wuxuu yidhi oo kale; WFP waxay ka mid tahay haya’daha yar ee loo ogolaaday inay ka dhex shaqeeyaan Ogadenya oo daris la ah Somaliya. Waxay mamulaan dhowr meeloo ay riwaayad ahaan wax ku qaybiyaan, iyagoo aan wax la sheego oo raashin ah u gaynin afartii sanee la soo dhaafay 90% dadka ku tabaalaysan Ogadenya oo abaaraha Geeska Afrika ku dhuftay ay dhibaateeyeen. Kobtan waa meesha ay ciidmada Itobiya iyo jabhadda ONLF ay ku dagaalamayeen tobankii sanee la soo dhaafay. WFP talaabada ay qaaday ee ah inay meelaha ay joogaan ONLF aysan raashinka geynin waxay ka mid tahay istraatiijiyada lagula dagaalamo jabhadaha ee ah, “hadadan kaloonka soo qaban karin, baliga ka madhi biyaha (“if you can’t catch the fish, drain the lake”.)
Laba bilood ak hor ayay koox WFP ah oo ka soo noqday goob ay daganaanyeen si khalad ah oga leexdeen wadadii ay ciidamada Itobiya u sheegeen inay maraan, ka dibna waxay ka soo dul dheceen meel ay ciidamada Itobiya ku laynayeen oy ku boobahayeen dad shacab ah oo lagu eedeeyey inay taageero siiyeen jabhadda ONLF. Sida muuqata waxay isku dayeen ina dib isu majiiraan hasa ahaatee ciidankii Itobiya ee laynta u joogay meesha ayaa ku furay rasaas oo kobtii ku dilay mid ka mid ah shaqaalihii WFP kuwii kaloo dhaawac ahna xeradii ciidanka ayay ula keceen.
Waxay isla waqtigiiba ku dhawaaqday Itobiya inay argagixisada ONLF soo weerareen kooxda WFP oy dileen mid ka mid ah, kuwii kalena afduubeen, hasa ahaatee ay ku daba joogaan.
Laba maalin ka dib ayay ciidankii ONLF weerar ku qaadeen xeradii lagu haystay kooxda WFP oy ka soo furteen iyagii iyo qaar kaloo maxaabiis ah oo kobtaa ku xidhnaa. Waxay Itobiya ku raadisay dayaaradaha dagaalka ee qumaatiga u kaca, hasa ahaatee kuma aanay guulaysan oo kooxdii WFP iyagoo nabad qaba ayay jabhadda ONLF ku wareejiyeen WFP iyagoo filayay inay WFP runta ka sheegto siday wax u dheceen, hasa ahaatee ilaa maanta arintaa kama aanay hadlin, mana aanay cambaareynin dilka loo gaystay shaqaalaheeda.
Xaasaska kuwii la soo daayay waxay ku noolyihiin meelaha ay ciidanka Itobiya maamulaan. Sidoo kale dadka la gubay tuulooyinkoodii, ama la laayay reerahoodii xaalkoodu waa afkiina haysta ama sidii loo galay kuwii idnka horeeyay umbaa laidiin gali. Wuxuu qoraaga caalamka weydiiyay, siduu ku ogaan karaa caalamka dadkaa reerahooda la laayay hadii laga soo eryay Ogadenya haya’dihii oo idil (the Red Cross, Doctors Without Borders and WFP). Waa sheeko dhamaatay.
Wuxuu ku soo gunanaday; 10 malyan oo Somali ah oo ku nool Ogadenya ayaa abaaraha la liita iyo cunaqabataynta la saaray, WFP-na arintaa way ka aamusantahay, sidaa darteed way kula jirtaa xasuuqa.
Hadaba WFP inay tahay khayr wade iyo inaysan ahayn adiguba xukun.